Marka maktabadaha music iyo filim aad u hesho weyn, waxa ay had iyo jeer ku wanaagsan yahay in dib loogu habeeyo.
Waxaa jirta gabaabsi ma hufan maamulayaasha maktabadda Lugood halkaas balse waa in shanta labixiyo:
Ugu sareysa 5 Maareeyayaasha Lugood Library yihiin:
4. TuneUp Lugood Library Management plugin
5. Tababare Lugood Library MacUpdate Desktop 6
Tani waa xal fiican xirfadda maaraynta maktabadaha Lugood. Waxaa haboon dhan jockeys disc, ururiya music iyo audiophiles kuwaas oo doonaya in ay ilaaliyaan nolosha habaysan oo habaysan muusikada digital. SuperSync saamaxaya kuwa isticmaala in uu abaabulo iyo isbarbar dhig iyo ku milmaan maktabadaha Lugood dhamaan kombiyuutarada shakhsi, Macs iyo qalabka macruufka. Waxa kale oo ay kaa caawin doontaa in la tirtiro waxyaabaha nuqul. Waxay leedahay qaababka kale oo xiiso leh sida warbixinta raad maqan kaas oo noqon kara mid aad u anfacaya ee maamulka haayaha badan oo music laga helay ilo kala duwan. Curyaanimada kaliya ee la SuperSync waa in kaliya laga heli karaa website-ka ah oo aan gudahood barnaamij
Waxa ay u ogolaataa dadka isticmaala si ay u maareeyaan music iyo warbaahinta kale files on qalabka macruufka iyo sidoo kale iyaga ka guuraan meel kale oo aan u socday iyada oo baahida loo qabo in lagu gelayaa Lugood.
TunesGo bixisaa interface ah oo quruxsan iyada oo dadka isticmaala ku heli karaan dhammaan muuqaalada app. Waxaa jira badhamada waaweyn si ay u aqoonsadaan falalka kala duwan ee la tilmaamo cad oo ah in la raaco caawinaad in dadka isticmaala ay garan wixii iyo markii ay ku xidhmaan. Baararka Xaaladda ayaa sidoo kale tilmaamaya sida wax si degdeg ah waxaa la raran. Oo dhan files muxaafidka la previewed kartaa qalab aad hor inta aan la dhoofin meesha uu soo xulay. Qalabka Multiple la xiran karo isku mar, samaynta hanaanka wareejinta xogta dardargelisay. TunesGo waa la jaan qaada iPhone 6s Plus / 6s / 6 Plus / 6 / 5S / 5 / 4s, iPod Touch 5, iPod Nano, iPod Classic, iPad Mini, iPad cusub iyo macruufka 9. naafada ayaa la TunesGo waa in ay tahay mid gaabis ah iyo qaar ka mid ah waxay qaadataa waqti barnaamijka inay ku shuban xogta ka iPhone ka.
Download.cnet.com Tifaftirayaasha Rating: 4.0 / 5.0
Waxa ay u ogolaataa oo dhan isticmaala Lugood in uu abaabulo maktabadaha music badan ka dhex fayl kala duwan oo ay wadaagaan music in inta u dhaxaysa dhowr isticmaala qalabka ah. Users ay awoodaan in ay nuqul music u dhexeeya maktabadaha kala duwan iyadoo la sii ratings iyo play dacwadood dhawrsan. Tani waxay awood u maktabadaha in ay la dumin doonaa unugyo yar oo ka dib ku biireen kuwa ka waaweyn. Waxa kale oo kuu ogolaanaya in dadka isticmaala ay u hagaajin ah kuwan raadkaygay music dhintay oo dhan, kuwaas oo files laga yaabaa in ay ku maqan. Ma la socon karaa OS X 10,10 iyo Lugood 12.
App Tani nadiifin kartaa ilaa files music aan si wacanna ku lug leh magacyada artist, tirada track iyo qaybaha. Waxa kale oo ay kaa caawin doonaan helitaanka tahay daboolka haddii ay ka maqan yihiin. Waxay kaa caawinaysaa in wargelisay dadka isticmaala oo dhan riwaayada degaanka haddii fanaaniinta ay jecel yihiin muuqday. Waxa uu jiidayo oo dhan ka kooban music wanaagsan internet-ka sida Youtube videos iyo Google News si loo kobciyo waayo-aragnimo u dhegeysanaya. Its rakibo waa mid fudud. Waxaa la socon kara labada Mac iyo PC versions of Lugood. Waxaa laga baarayo doonaa maktabadda ilbiriqsi gudahood. Its khasaaro waa in ay lacag la'aan ah version waa halkii xaddidan oo aan si buuxda u shaqayso. Barnaamijku wuxuu hound doonaa user a si diiwaan mar kasta oo isaga ama iyada waxaa laga furay.
Rating by Download.cnet.com Editors: 2.5 / 5.0
5. Maamulaha Lugood Library MacUpdate Desktop 6
App Tani dhigi doonaa nuqul raad raac ah oo maktabadaha music ee Lugood ah, files database iyo aad rabtid Lugood. Tani waxay ka caawisaa dadka isticmaala ee badbaadiyo maktabadaha badan si fudud. Gaadmada ah ee la door la raadsan karaa dhib badan oo aan oo la raran karo mar kasta oo aad jeceshahay. Waxaa la socon kara Lugood 10.4 iyo OS X 10.7 Libaaxa. Curyaanimada waa in aysan u shaqeeyaan qalabka Power PC
> Resource > Lugood > Top 5 Lugood Library Maareeyayaasha